Wararka Maanta: Sabti, Jun 29, 2013-AFHAYEENKA AMISOM: “Dagaalka Kismaayo waxaa Mas’uuliyadiisa iska leh dowaldda, innagu dhexdhexaad ayaan ka nahay”
Col. Xumad oo u warramayay VOA-da ayaa sheegay in ciidamadooda aysan wax lug ah ku lahayn dagaalka socda, cid gaar ah oo ay la jiraanna aysan jirin, ayna si isku mid ahna loogu daweynayo isbitaallada AMISOM ay halkaa ku leedahay dhaawacyadii soo kala gaaray dhinacyada dagaallamaya.
“AMISOM waxay ka xun tahay dagaallada ka dhacay Kismaayo ee walaalaha Soomaalida dhexmaraya, ciidamadeennuna waxay leeyihiin mas’uulyiad ay ku shaqeeyaan oo ay u soo tababarteen, mas’uuliyaddooduna waa ay kaga shaqeeyaan dalka, howshooduna waa inay nabadda Soomaaliyeed xaqiiyaan, waxaana mas’uuliyadda ciidamada ciidamada halkaas jooga ay saran tahay ciidamada Kenya,” ayuu afhayeenka AMISOM ku yiri wareysiga.
Sidoo kale, afhayeenku wuxuu sheegay in wadahadallo looga dooday xiisada ka taagan Kismaayo ay ka socota Addis Ababa, kaasoo ay leeyihiin AMISOM, IGAD, dowaldda Soomaaliya iyo Sheekh Axmed Madoobe, go’aannada kasoo baxana waan sugaynaa.
“Sida madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay mas’uuliyaddeenna waa inaan ilaalinno shacabka halkaas ku sugan iyo hantidooda, innaguna labada dhinac dhexdhexaad ayaan ka nahay, mana jirto cid aan qori u qaadannay,” ayuu Col. Xumad hadalkiisa ku daray.
Mar la weydiiyay eedeyn ay u soo jeediyeen AMSIOM dhinacyada taageera Col. Barre Hiiraale iyo raga la socda oo ah inay ciidamada Kenya qayb ka yihiin dagaalka oo ay madaafiic magaalada ku garaaceen, ayuu sheegay inay yihiin kuwo aanay waxba ka jirin.
“Innagu waxaan dagaalkaas ka nahay dhexdhexaad mana jirto cid aan qori u qaadannay, balse mas’uuliyadda dagaalka Kismaayo waa mid ay leedahay dowladda Soomaaliya, howsheenana waa inaan ku soconno hadafka iyo sida ay doonayso dowladda Soomaaliya, dhaqkhtaradeennana waxaa xilligan lagu daweynayaa 10 ka mid ah dhinacyadii dagaalamay,” ayuu afhayeenku ku daray hadalkiisa.
Dhanka kale, Col. Xumad wuxuu sheegay in xilligan ay xabbadu joogsatay oo xaalku deggen yahay, howsheenuna waa inaan joojinno haddii uu dagaal meel ka dhaco, taasna waan ku soconaynaa maadaama ay mas’uuliyaddeenu tahay.
Ugu dambeyn, afhayeenku wuxuu ka hadlay xariga ay ciidamada AMISOM u geysteen abaanduulihii ciidamada xoogga dalka ee gobollada Jubbooyinka Col. Cabbaas, isagoo sheegay in lagu hayo deegaanka Dhoobley, wixii soo gaaraya ay mas’uul ka yihiin ciidamada halkaas ku sugan.
Waa markii ugu horreysay oo AMISOM ay si toos ah ugu eedeyso dowladda Soomaaliya dagaallada Kismaayo ka socda, iyadoo madxda dowladdu ay ku cel-celinayeen labadii maalmood ee lasoo dhaafay in dagaalka Kismaayo si dhaqso ah lagu joojiyo, ciidamada Midowga Afrikana ay dhexdhexaad ka noqdaan dagaalka.